AKFM: “Tsy midika ho tsimatimanota ny amnistia” | NewsMada
AKFM: “Tsy midika ho tsimatimanota ny amnistia”
“Samy hafa ny famelan-keloka sy ny famotsoran-keloka avoakan’ny fanjakana. Tsy midika hoe tsimatimanota ny fanomezana famotsoran-keloka. Tsy ekena raha olona nahavita heloka teto amin’ny firenena no omena izany famotsoran-keloka izany.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, momba ny
fanomezan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM) famotsoran-keloka. Ny firaisankinantsika Malagasy aloha no tanjona amin’izao fotoana izao. Noho izany, tsy tokony hanagadrana olona ny tsy fitovian-kevitra, indrindra ny ara-politika eo amin’ny mpanao politika.
Raha noho ny tsy fitovian-kevitra ara-politika, ohatra, no anton’ny anagadrana olona: heverina fa rariny ny famotsoran-keloka. Saingy raha nanao heloka bevava tamin’ny fitondrana na fihetsika politika natao, tsy tokony hahazoana famotsoran-keloka izany amin’ny AKFM: tonga amin’ny hoe tsimatimanota. Anisan’izany, ohatra, ny fandrobana harem-pirenena, ny fanodinkodinana volam-panjakana, ny fandatsahan-dra ny mpiray tanindrazana…
Mila fantarina aloha ny heloka
“Raha misy an’izay fifamelana izay, ohatra: aleo aloha fantarina tsara ny heloka vita, tsaraina araka ny lalàna”, hoy izy. Avy eo, mifampidinika amin’ireo tra-pahavoazana sy ireo maty fianakaviana sy naratra ireo nampanao izany: ireo no manapa-kevitra hoe misy fifamelan-keloka.
Ny lalàna aloha no tokony hovaina: eo ambany lalàna avokoa rehefa olom-pirenena, araka ny iaraha-manaiky. Rehefa nandika lalàna, na inona na inona andraikitra tanana sy ny toerana misy ny tena eto amin’ny firenena: tokony ho fitsarana iray ihany no mitsara azy, ary mitovy amin’ny olom-pirenena rehetra.
Toy izany koa ny amin’ny tombon-jo parlemantera hoe tsy azo kitikitihina, rehefa manana andraikitra. Efa tratra ambodiomby ny sasany, fa miafina ao ambadik’izay fotsiny. Tsy azo ekena izany, fa tokony hovaina ny lalàna. Rehefa olom-pirenena, na inona na inona andraikitra sy toerana: eo ambany lalàna avokoa. Ampiharina mitovy ny lalàna na amin’ny olom-pirenena iza na iza, na inona na inona andraikitra tanana.